Home > Goorta Sharciyada Caddaaladda Guryeynta ee Aan Lagu Dabaqayn Guryaha Kireysiga (Fair Housing Podcast - Somali)
Xeerka Caddaaladda Guryeynta waa sharci wadanka ka jira oo oranaya in milkiilaha guriga uusan takoor kugu samayn karin takoorkaas oo sal looga dhigo jinsi, middab, diin, asal qaran, lab/dheddig, xaaladda qoys ama naafonimo, marka aad waydiinayso wax ku saabsan guryo kiro ah, aad buuxinnayso guryo kiro, aad degan tahay guri kiro, ama aad ka baxayso. Jinsi, middab, diin, asal qaran, lab/dheddig, xaaladda qoys iyo naafonimo waa sifooyin loo yaqaan Qaybaha la Ilaaliyo.
Xeerka Xuquuqda Aadanaha ee Maine waa sharci gobolka u degsan oo oranaya in milkiilayaasha guryaha aysan wax takoor ah adiga kugu samayn karin goorta adigu aad qayb ka tahay qaybaha la ilaaliyo, intaa waxaa dheer sharciga waxaa lagu daray hanaan-jinsi, naafonimo dhanka jirka ama maskaxda, fir, iyo dadka qaata gargaarka dadwaynaha ayaa lagu daray Qaybaha la Ilaaliyo.
Sharciyada Guryaynta Caddaaladda wuxuu mamnuucayaa in dadka qaybaha la ilaaliyo loola dhaqmo si ka duwan shuruudaha, waxyaabaha lagu xiray iyo mudnaanta kiraynta. Tusaale ahaan, haddii aad awoodo in kirada aad iska bixiso, sharci daro ayay ku tahay in kuwa guryaha ijaaraya ay kuu diidaan in ay guriga ku tusaan ama guryaha kaa ijaaraan sababtoo ah in adigu aad tahay qof soo galooti ah, ama carruur aad wadato darteed, ama takhtarkaaga kuu qoray in aad haysato xaywaan ku caawiya oo loogu talagalay dadka naafada ah darteed.
Sharciyada Guryaynta Caddaaladda wuxuu mamnuucayaa in waxyaabaha lagu dhawaaqo si qaylo ah ama iidah qoraal ah ama calaamaddo dhiirigelinaya dadka Qaybaha la Ilaaliyo inay guriga fiiriyaan ama guriga ay kireystaan. Sidoo kale wuxuu mamnuucayaa in isbeddello lagu sameeyo xeerarka dadka naafooyinka ah ay u baahan yihiin in ay ku noolaadaan guryaha ijaarka. Dhammaan dadka raadinaya, codsanaya, iyo kuwa ku nool guryaha ijaarka ah waa in loola dhaqmaa isla si haddii ba ay karaan in ijaarka ay iska bixiyaan.
Sharciyada Guryaynta Caddaaladda laakin ma quseeya guryo qaar iyo xaaladdo qaar. Guryaha qaar ee laga deeyo waxaa ka mid ah:
Guryaha uu degan yahay qofkii isla lahaa guryaha leeyahay afar qaybood ama in ka yar.
Gobolka Maine, guryaha qofka milkiilaha uu degan yahay oo aan la hayn in ka badan laba qaybood oo la dego.
Guryaha dadka waayeelka, kaas oo xaddidaya da’da dadka guriga degan.
Urur diimeedyada iyo naadiyada gaarka ah, kaas oo ku xaddidaya xubnaha dadka degan, haddiiba aysan meesha jirin wax takoor ah oo lagu saleeyo jinsi, middab ama asal qaran.
Haddii aad qabto wax su’aallo ah oo ku saabsan Guryaynta Caddaaladda iyo waxyaabaha ka reeban, la soo xiriir Pine Tree Legal si aad u oggaato haddii aan ku caawin karno. Si aad u hesho halka aad nagala soo xiriiri karto booqo www.ptla.org. 
Ama si toos ah ayaa waxaad ula soo xiriiri kartaa mid ka mid ah xafiisyadan:
Waaxda Guryeynta iyo Horumarinta Magaalooyinka Maraykanka
(U.S. Department of Housing and Urban Development, HUD)
617-994-8300 ama 1-800-827-5005
Qadka Dadka Maqalka ka Adag (TTY): 1-617-565-5453
Guddiga Xuquuqda Aadanaha ee Maine
(Maine Human Rights Commission)
207-624-6290 Qadka Dadka Maqalka ku Adag (TTY): 1-888-577-6690
Cod baahintan waxaa maalgeliyay U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD) iyadoo ay hoos imaanayso Deeqda Hal-abuurka Guryaynta Caddaaladda. Xogta halkan lagu soo bandhigey daruuri ma aha inay ka muuqato fekradda hay’adda HUD.
Source URL (modified on 05/29/2019 - 9:35am): https://m.ptla.org/goorta-sharciyada-caddaaladda-guryeynta-ee-aan-lagu-dabaqayn-guryaha-kireysiga-fair-housing-podcast